Cos'è una maledizione generazionale e sono reali oggi? | PREGHIERA&NEWS
Kedu ihe bụ ọbụbụ ọnụ n'ọgbọ ma ha dị adị taa?
Paolo Tescione	Edere ya Ọktoba 10, 2020 Ọktoba 10, 2020
Okwu a na-anụkarị na ọgbakọ Ndị Kraịst bụ nkọcha nke ọgbọ. Amaghị m na ndị na-abụghị Ndị Kraịst na-eji okwu ahụ ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ anụtụbeghị ya ma ọ bụrụ na ha eme ya. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịnọ na-eche ihe otu ọbụbụ ọgbọ bụ. Ọbụna ụfọdụ na-aga n'ihu ịjụ ma ọbụbụ ọnụ ọgbọ ọ dị adị taa? Azịza nye ajụjụ a bụ ee, ma ọ nwere ike ọ bụghị n'ụzọ ị chere.
Kedu ihe a bụrụ ọnụ n'ọgbọ?
Iji malite, Achọrọ m ịkọwagharị okwu a n'ihi na ihe ndị mmadụ na-akọwakarị dịka ọbụbụ ọnụ ọgbọ bụ n'ezie nsonazụ ọgbọ. Ihe m na-ekwu bụ na ihe agafere abụghị “nkọcha” n'echiche bụ na Chineke na-akọcha usoro ezinaụlọ. Ihe a na-enyefe bụ nsonazụ nke omume na omume mmehie. Ya mere, ọbụbụ ọnụ nke ọgbọ bụ n'ezie ọrụ nke ịgha mkpụrụ na owuwe ihe ubi nke si n'otu ọgbọ gaa n'ọzọ. Tụlee Ndị Galeshia 6: 8:
“Ekwela ka e duhie gị: A gaghị achịrị Chineke ọchị. Nwoke na-aghọrọ mkpụrụ ọ ghara. Onye ọ bula nke gha agha ime nkpuru nke aka ya onwe-ya g willkpochapu nbibi nke anu-aru-ya; onye ọbụla na-agha mkpụrụ ime mkpụrụ obi mmụọ, mkpụrụ si na Mmụọ Nsọ ga-aghọrọ ndụ ebighị ebi.
Nkọcha nke ọgbọ bụ nnyefe nke omume mmehie nke a na-eme na ọgbọ ọzọ. Nne ma ọ bụ nna na-egosipụta ọ bụghị nanị àgwà anụ ahụ kamakwa àgwà ime mmụọ na nke mmetụta uche. Enwere ike ilele njirimara ndị a dịka ọbụbụ ọnụ na n'akụkụ ụfọdụ ha bụ. Agbanyeghị, ha abụghị ọbụbụ ọnụ sitere n’aka Chineke n’echiche na O tinyere ha n’elu gị, ha bụ nsonazụ nke mmehie na omume mmehie.
Kedu ihe kpatara mmehie nke ọgbọ?
Iji ghọta mmalite nke mmehie ọgbọ, ị ga-alaghachi na mbido.
"Ya mere, dị ka mmehie si n'aka otu mmadụ bata n'ụwa, ọnwụ esikwa ná mmehie bata, ọnwụ wee si otú ahụ bịakwasị mmadụ niile, n'ihi na mmadụ niile emehiewo" (Ndị Rom 5:12).
Obụ ọnụ nke mmehie malitere site Adam n’ogige ahụ, ọ bụghị Mosis. N’ihi mmehie Adam, a mụrụ anyị nile n’okpuru ọbụbụ ọnụ nke mmehie. Nkọcha a na - eme ka anyị niile bụrụ ndị a mụrụ site n'ọdịdị mmehie nke bụ ezi ihe na - akpata omume mmehie ọ bụla anyị na - egosipụta. Dika Devid kwuru, “N’ezie a mụrụm onye nmehie, onye mmehie site na mgbe nne m tụụrụ ime m” (Abụ Ọma 51: 5).
Ọ bụrụ na a hapụ naanị ya, mmehie ga na-agba ọsọ ya. Ọ bụrụ na -enweghị mgbe chere ya ihu, ọ ga-akwụsị na nkewapụ ebighi ebi n'ebe Chineke nọ. Nke a bụ nkọcha kachasị n’ọgbọ. Agbanyeghị, mgbe ọtụtụ mmadụ na-ekwu maka ọbụbụ ọnụ ọgbọ, ha anaghị eche maka mmehie mbụ. Yabụ, ka anyị tụlee ozi niile dị n'elu wee chepụta azịza zuru oke maka ajụjụ a: Ọbụbụ ọnụ ọgbọ ọ dị adị taa?
Ebee ka anyị na-ahụ ọbụbụ ọnụ ọgbọ na Akwụkwọ Nsọ?
Ọtụtụ nlebara anya na ntụgharị uche na ajụjụ ma ọbụbụ ọnụ ọgbọ na-adị adị taa sitere na Ọpụpụ 34: 7.
“Ọ hapụghị inye ndị ikpe mara n’enyeghị ntaramahụhụ; na-ata ụmụaka na ụmụ ha ahụhụ maka mmehie nne na nna ha n’ọgbọ nke atọ na nke anọ. "
Mgbe ị gụrụ nke a na iche, ọ bụ ihe kwere nghọta mgbe ị na-eche banyere ma ọbụbụ ọnụ nke ọgbọ dị adị taa iji mechie ee, dabere na amaokwu Akwụkwọ Nsọ a. Agbanyeghị, achọrọ m ileba anya n'ihe Chineke kwuru tupu oge a:
O we gabiga n'iru Moses, n proclaimkwusa, si, Onye-nwe-ayi, Onye-nwe-ayi, Chineke nke nwere obi-ebere, Onye nādighi-ewe iwe ọsọsọ, Ọ di uku n'ebere na ikwesi-ntukwasi-obi; mmehie. Ma ọ dighi-ekpe ha ikpé; na-ata ụmụaka na ụmụ ha ahụhụ maka mmehie nke ndị mụrụ ha n'ọgbọ nke atọ na nke anọ "(Ọpụpụ 34: 6-7).
Kedu otu ị ga - esi mee ka nghọtahie abụọ nke Chukwu a dị n’otu? N’aka nke ozo, inwere Chineke nke nwere obi oma, Onye obi oma, Onye na-adighi ewe iwe obula, nke na agbaghara nmebi iwu, nnupu isi na nmehie N'aka nke ọzọ, i nwere Chi nke na-enye ntaramahụhụ maka ụmụaka n'ihi mmehie nke ndị mụrụ ha. Olee otú abụọ ndị a oyiyi nke Chineke di na nwunye?
Azịza ya ga-akpọghachi anyị n’ụkpụrụ ahụ e kwuru na Ndị Galetia. Maka ndị chegharịrị, Chineke na-agbaghara. Nye ndị jụrụ, ha malitere ịgha mkpụrụ na iwe ihe ubi nke mmehie. Nke a bụ ihe agafere site n’ọgbọ ruo n’ọgbọ ọzọ.
Nkọcha nke ọgbọ ọ ka dị adị taa?
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere azịza abụọ nye ajụjụ a ma ọ dabere na otu ị si akọwa okwu ahụ. Iji mee ka o doo anya, ọbụbụ ọnụ nke ọgbọ nke mmehie mbụ ka dị ndụ taa. A mụrụ mmadụ niile n'okpuru ọbụbụ ọnụ a. Ihe dị ndụ ma dịrị adị taa bụ nsonazụ ọgbọ nke na-enweta site na nhọrọ mmehie nke sitere n'ọgbọ ruo n'ọgbọ.
Otú ọ dị, nke a apụtaghị na ọ bụrụ na nna gị bụ onye aholicụrụma, onye na-akwa iko, ma ọ bụ onye na-eme mmehie, nke a bụ onye ị ga-abụ. Ihe ọ pụtara bụ na omume a nna gị ma ọ bụ ndị mụrụ gị gosipụtara ga-enwe nsonaazụ na ndụ gị. Ma ọ bụ nke kacha mma ma ọ bụ nke ka njọ, ha nwere ike ịgbanwe otú i si ele ndụ na mkpebi na mkpebi ndị ị na-eme anya.
Ọbụbụ ọnụ nke ọgbọ na-abụ ezighi ezi na ikpe na-ezighi ezi?
Anotherzọ ọzọ iji leba anya n’ajụjụ a bụ na ọ bụrụ na Chineke bụ onye ezi omume, gịnị kpatara Ọ ga-eji bụrụọ ọgbọ ọnụ? Iji mee ka o doo anya na ọ dị mkpa icheta na Chineke adịghị akọcha ọgbọ. Chineke na-ekwe ka nsonaazụ nke mmehie na-enweghị nchegharị were ụzọ ya, nke m chere na enwere ike ịrụ ụka na ọ bụ ọbụbụ ọnụ n'onwe ya. Na ngwụcha, dịka atụmatụ Chukwu si dị, onye ọbụla ga-aza ajụjụ maka omume mmehie ha, a ga-ekpekwa ya ikpe dịka o siri dị. Tụlee Jeremaịa 31: 29-30:
"N'ụbọchị ndị ahụ, ndị mmadụ agakwaghị asị, 'Ndị mụrụ ha riri mkpụrụ vaịn na-achaghị acha, ezé ụmụaka makwara.' Kama, onye ọ bụla ga-anwụ n’ihi mmehie nke ya; onye ọ bụla riri mkpụrụ vaịn na-achaghị acha, ezé ya ga-eto ”.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịnagide nsogbu mmehie nne na nna gị na-enweghị nchegharị, ị ka ga-aza ajụjụ maka mkpebi na mkpebi gị. Ha nwere ike metụta ma mee ka ọtụtụ n'ime omume ndị ị na-eme, mana ha ka bụ omume ị ga-ahọrọ ịhọrọ ime.
Kedu ka ị si agbaji ọbụbụ ọnụ ọgbọ?
Echeghị m na ị nwere ike ịkwụsị na ajụjụ a: ọbụbụ ọnụ ọgbọ ọ dị adị taa? Ajụjụ kachasị mkpa n’uche m bụ kedu ka ị ga-esi mebie ha? Anyị niile amụrụ n’okpuru ọbụbụ ọnụ nke mmehie Adam ma anyị niile na-ebu ihe ndị si n’ọgbọ pụta nke mmehie nne na nna anyị na-enweghị nchegharị. Olee otú ị na-agbaji a niile? Ndị Rom na-enye anyị azịza ya.
"N'ihi na ọ bụrụ na, site na nsogbu nke otu mmadụ, ọnwụ si n'aka otu onye ahụ chịa, olee otu a ga-esi were ndị ahụ natara ụba onyinye amara Chineke na onyinye nke eziomume chịa na ndụ site n'aka otu nwoke , Jesu Kristi! Ya mere, dịka otu njehie si duhie amamikpe nye mmadụ niile, otu a ka ezi omume siri duga izi ezi na ndụ maka mmadụ niile ”(Ndị Rom 5: 17-18).
Ihe ngwọta maka imebi ọbụbụ ọnụ Adam nke mmehie na nsonazụ nke mmehie nne na nna gị dị na Jizọs Kraịst. Mmadu obula amuru ozo n’ime Jisos Kraist ka emere ohu ohuru, inoghi n’onodu onu nke nmehie obula. Tụlee amaokwu a:
“Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla dị n’ime Kraịst [ya bụ, anyadokwa, nke e jikọrọ ọnụ site na ya site n’okwukwe n’ime Ya dịka Onye Nzọpụta], ọ bụ onye e kere eke ọhụrụ ihe ochie nile [ọnọdụ omume mbụ na nke ime mmụọ] agabigawo. Lee, ihe ọhụrụ abịawo [n'ihi na edemede nke ime mmụọ na-eweta ndụ ọhụụ] ”(2 Ndị Kọrịnt 5:17, AMP).
N'agbanyeghị ihe mere tupu, ozugbo ị bụ n'ime Kraịst ihe niile bụ ohuru. Mkpebi a iji chegharịa ma họrọ Jizọs dị ka onye nzọpụta gị na-akwụsị nkọcha ọgbọ ọ bụla ma ọ bụ nsonaazụ ị na-eche. Ọ bụrụ na nzọpụta agbaji ikpeazụ ọbụbụ ọnụ nke mmehie mbụ, ọ ga-emebi ihe mmehie ọ bụla nke ndị nna gị mere. Ihe ima aka diri gi bu ka i na-aputa n’ihe Chineke mere n’ime gi. Ọ bụrụ na ị nọ na Kraist, ị bụkwaghị onye mkpọrọ nke oge gara aga, enwerela gị.
Jiri obi eziokwu mgbe ụfọdụ ọnya nke ndụ gị gara aga na-adịgide, mana ịkwesighi ịdaba na ha n'ihi na Jizọs etinyela gị n'ụzọ ọhụrụ. Dị ka Jizọs kwuru na Jọn 8:36, "Ya mere ọ bụrụ na Ọkpara ahụ emee ka ị nwere onwe gị, ị ga-enwere onwe gị n'ezie."
Mụ na gị mụrụ site na ọbụbụ ọnụ na nsonaazụ. Nkọcha nke mmehie mbụ na nsonazụ nke omume ndị mụrụ anyị. Ozi ọma ahụ bụ na dịka a pụrụ isi na-ebute omume mmehie, otu a ka a na-esi ebute omume Chineke. Ozugbo are batara n’ime Kraist, ị nwere ike bido n’okwasị ọhụụ nke ndị mmadụ na Chineke na-ejegharị site n’ọgbọ ruo n’ọzọ.
N'ihi na ị bụ nke ya, ị nwere ike ịgbanwe ezinụlọ gị site n'ọbụbụ ọgbọ ruo ngọzi ọgbọ. I di ohuru n’ime Kristi, inwere onwe gi n’ime Kristi, ya mere jeghari n’ime ohuru ahu na nnwere onwe ahu. N'agbanyeghị ihe mere tupu, ekele Kraịst ị nwere mmeri. M na-arịọ gị ka ị bie na mmeri ahụ wee gbanwee usoro ọdịnihu nke ezinụlọ gị n'ọgbọ na-abịa.
Nke gara aga Post Gara aga post:Ihe kpatara Carlo Acutis ji dị mkpa taa: "Ọ bụ otu puku afọ, nwa okorobịa na-eweta ịdị nsọ n'ime puku afọ nke atọ"
Next Post → Post ozo:Ekpere maka iti ihe nke Carlo Acutis